सापकोटालाई सभामुख बनाउने भएपछी ओलीलाई उप सभामुख तुम्बाहाङफेको यस्तो प्रश्न….?::Nepal's Digital News Portal
प्रकाशित मिति : सोम, माघ ६, २०७६
काठमाडौं । नेकपाको सचिवालय बैठकले अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुखको उम्मेदवार बनाइरहँदा आइतबार नै उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङफे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगिन् ।
नेकपा सांसद डा. शिवमाया तुम्बाहाङफे ०७४ साल चैत्र २ गते प्रतिनिधिसभामा उपसभामुख निर्वाचित भएकी थिइन् । सभामुख कृष्णबहादुर महराको राजीनामापछि उनले सभामुख बन्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएकी थिइन् ।
हुन त उपसभामुख छाडेपछि शिवमायालाई मन्त्री बनाएर व्यवस्थापन गर्ने चर्चा पनि नेकपाभित्र चल्दै आइरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीसँग आइतबार भएको पावर सेयरिङबारे कुराकानी भए/नभएको खुलेको छैन । स्रोतका अनुसार नेकपा शीर्ष नेतृत्वले सोमबार बिहान शिवमायासँग थप छलफल गर्ने भएको छ ।